YouTube ကို SEO ဆိုသည်မှာ
ကြော်ငြာများမ ၀ ယ်ဘဲအများဆုံးအော်ဂဲနစ်ကြီးထွားမှုအတွက်ယူကျု၏အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ချန်နယ်နှင့်ဗွီဒီယိုများကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် YouTube Channel ကြီးထွားမှုအတွက် Google အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube အသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သူများသည် YouTube SEO ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုပေးသောအကောင်းဆုံးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောမဟာဗျူဟာများကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိကြသည်။ သင်၏ရုပ်သံလိုင်းနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝအကဲဖြတ်ပါမည်။ ထို့နောက်သင့်အားတိကျသေချာစေရန်အသေးစိတ်ရှာဖွေရန်လွယ်ကူစွာလိုက်နာရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုရှာဖွေပြီးရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အဆင့်မြင့်ရမည်။ ၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောကြည့်ရှုသူများ၏အသွားအလာကိုအော်ဂဲနစ်များသို့ပို့ဆောင်သည်။
သင်၏ YouTube channel ၏အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုအကဲဖြတ်မှုသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်သင်၏နောက်ခြေလှမ်းများအတွက်အဆင့် ၅ ဆင့်ပါလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုဆန်းစစ်ပါ။
သင်၏ 45 မိနစ်ဗီဒီယိုပါဝင်သည်:
ဗီဒီယိုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Subs ရယူရန်လျှို့ဝှက်ချက်များ
သင့်အတွက်အသေးစိတ်အဆင့် ၅ ဆင့်ပါလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်
ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန်:4မှ7ရက်
သင်၏ YouTube ဗီဒီယိုကိုအပြည့်အဝအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ် + ဖော်ပြချက် +5သော့ချက်စာလုံးများ / Hashtags ကိုသင့်အားပေးခွင့်ပေးသည်။
ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံ SEO ဆန်းစစ်ခြင်း
1 Enhanced ခေါင်းစဉ်ပေး
1 Enhanced ဖော်ပြချက်ပေး
5 ရှာဖွေထားသောသော့ချက်စာလုံးများ / Hashtags
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး၊ အပြည့်အဝပြန်လည်ဒီဇိုင်း YouTube Channel Banner နှင့် YouTube Video Thumbnails
အားကောင်းသော & ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်း
သင်၏ Click-Thru-Rate (CTR) ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်
ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန်: 1 မှ4ရက်
YouTube Channel ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ
မည်သူသည် YouTube Channel Assessment ကို ၀ ယ်သင့်သနည်း။
မင်းရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုကြီးထွားရန်သင်ရုန်းကန်နေရသော YouTuber သေးငယ်သလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများသည် YouTube ကြည့်ရှုသူသန်းတစ်ရာနီးပါးရှိပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာဗီဒီယိုများဖန်တီးခဲ့ကြသည့်သန်းပေါင်းများစွာသော YouTube အမြင်များရှိသော YouTubers ကိုယ်တိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများသည် YouTube ကိုအတွင်းပိုင်းမှသိပြီးသူတို့ဗွီဒီယိုပေါ်တွင်သင်၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်သူတို့နှင့်သင်၏ဗဟုသုတကိုမျှဝေမည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ပြီးမှကျွန်ုပ်အားဘာပေးမည်နည်း။
မင်းတို့ရဲ့ YouTube channel ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်အကဲဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို ၄၅ မိနစ်ထက်မကသောဗွီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို YouTube သို့တင်ပြီးဗီဒီယိုကို (သင့်အတွက်သာ) သီးသန့်ဖြစ်စေပြီးအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်သင်၏အကဲဖြတ်မှုကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။
သင်၏ခေါင်းစဉ်များ၊ သမ်းနံ့များ၊ အကြောင်းအရာဗျူဟာ၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ဖော်ပြချက်၊ ပင်မစာမျက်နှာစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
၆။ အဆင့် ၅ ဆင့်ပါလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်။
မဟုတ်ပါ၊ သင်၏လော့ဂ်အင်အထောက်အထားများကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ YouTube ချန်နယ်ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့မဝင်ပါ။
သင်၏ရုပ်သံလိုင်းအားအသေးစိတ်အကဲဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမိနစ် ၄၅ မိနစ်ရှိသောဗွီဒီယိုတစ်ခုပေးပါမည်။ သင်အဆင်ပြေစွာကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောအကြံဥာဏ်များ / ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
YouTube channel အမျိုးအစားတစ်ခုခုနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်မလား။
ဟုတ်ကဲ့! ကျွန်ုပ်တို့သည် YouTube channel အမျိုးအစားတိုင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်မည်သည့်နေရာ၌ပင်ရှိနေပါစေသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သော YouTube ချန်နယ်များကိုချင့်ချင့်ချိန်ချိန်သုံးသပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့! မင်းရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုဗွီဒီယိုနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်၊ အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်နှစ်သက်တဲ့ဘာသာနဲ့ဘာသာပြန်စာတန်းထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအင်္ဂလိပ်မဟုတ်သည့်ယူကျုးချန်လိုင်းများ၌သင်ပေးနိုင်သလား။
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ရရှိမည့်ဗွီဒီယိုသည် ၄၅ မိနစ်ခန့်ကြာမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ယူကျု့ချန်နယ်တွင်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ပြည့်ဝလိမ့်မည်။
သင်မှာယူပြီးနောက်သင် Channel အကဲဖြတ်ရန် 3-7 ရက်ကြာသည်။
YouTube Video SEO မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဆင့်မြှင့်ထားသောခေါင်းစဉ်များ၊ ဖော်ပြချက်များနှင့်သော့ချက်စာလုံးများ / Hashtags ကကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သနည်း။
သင့်အားခေါင်းစဉ်၊ ဖော်ပြချက်နှင့်သော့ချက်စာလုံးများ / Hashtags ကိုသင့်အားအကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ရန်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုရန်နှင့်သင်၏ဗီဒီယို၏ကလစ်နှိပ်မှုနှုန်း (CTR) ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များနှင့်ပရီမီယံသုတေသနကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ YouTube Channel ၀ င်ရောက်ခွင့်အထောက်အထားများကိုသင်လိုအပ်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ဝင်ခွင့်အထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ YouTube ချန်နယ်ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့မဝင်ပါ။ စိတ်ကြိုက်အကြံပြုချက်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့်အစားအသေးစိတ်ကျပြီးနားလည်ရလွယ်ကူသည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေးပါသည်။ ၎င်းသည်သင်လွယ်ကူပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲမှုများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်သည် YouTuber အဖြစ်သင်ယူရန်နှင့်ကြီးထွားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
မည်သည့် YouTube Channel မဆိုသင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါကိုရှင်းပြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်ဘာသာစကားမှာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်အခြားဘာသာစကားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်အားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပေးပို့နိူင်သည်၊ သင် Google Translate ကိုသင်၏ဘာသာစကားသို့ပြောင်းလဲရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဂူဂယ်လ် Translate သည်အကောင်းဆုံးသောဘာသာပြန်ဆိုမှုကိုပြုလုပ်သောကြောင့်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်အခြားဘာသာစကားဖြင့်ပင်လျှင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများမှများစွာအကျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏ပန်းတိုင်များပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်၊ ပထမလတွင်တိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းကိုသင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် YouTube သည်ရလဒ်များကိုချက်ချင်းမွမ်းမံပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလများအတွက်အရှိန်အဟုန်သည်တက်လာပြီးတစ်လပြီးတစ်လ ဆက်၍ ဆက်လက်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားတစ်စီးကဲ့သို့…ရလဒ်များနှေးလာလိမ့်မည်၊ သို့သော်အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်အပြည့်အဝမြန်ဆန်စွာမောင်းနှင်နိုင်လိမ့်မည်! ဤရလဒ်သည်သင်တို့၏အကြံပေးချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးသင်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုလည်းတင်နေသည်ဟုထင်မြင်နေသည်။ အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကကူညီလိမ့်မည်၊ သို့သော်အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်သင်တွေ့မြင်ရမည့်ရလဒ်များလေလေဖြစ်သည်။
Enhanced Channel Banner နှင့် Video Thumbnails များသည်ကျွန်ုပ်၏ Channel ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်ကူညီနိုင်မည်နည်း။
အွန်လိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ရုပ်သံလိုင်းသို့သွားပြီးသူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောနဖူးစည်းစာတန်းနှင့်ဗွီဒီယိုသမ်းနေးများကိုမတွေ့ပါကနောက်ကျောခလုတ်ကိုလျင်မြန်စွာနှိပ်ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်ဂရပ်ဖစ်များကိုတင်ပြီးသင်၏တိုးချဲ့ပညာရှင်ဆန်သော“ စတိုးအသွင်အပြင်” ကိုမြင်သောအခါသင်၏မျက်နှာကိုပြုံးလိမ့်မည်။
Professional Video Thumbnails ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။
သင်ကြည့်လျှင်အဓိက YouTubers အားလုံးသည်သူတို့၏ဗီဒီယိုများပေါ်လာစေရန်နှင့်ပိုမိုကလစ်နှိပ်ရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်ဗွီဒီယိုသမ်းနေးပုံများကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အရည်အသွေး၊ စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်သွင်ပြင်များကသင်၏ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကြည့်ခြင်းထက်ပိုကြည့်ကောင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပိုလူကြိုက်များလိမ့်မည်။ သင်၏ဗွီဒီယိုသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အဆင့်နိမ့်နေလျှင်ပင်စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်သွင်ပြင်သည်သူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးသင်၏ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သူတို့ကိုအားပေးလိမ့်မည်။
စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်သွင်ပြင်သွင်ပြင်များသည်သင်၏ YouTube နှင့် Google search rankings များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသင့်အတွက်အော်ဂဲနစ်လမ်းကြောင်းများပိုမိုဖန်တီးပေးသည်။
မဟုတ်ပါ၊ သင်၏လော့ဂ်အင်အထောက်အထားများကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ YouTube ချန်နယ်ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့မဝင်ပါ။ ဂူဂဲလ်များကသင့်ကိုသင်ကိုယ်တိုင် upload လုပ်နိုင်မည့်အစား၊ ၎င်းသည်သင်လွယ်ကူပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်သည်သင်တိုးချဲ့ရန် YouTuber အဖြစ်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့! သင်၏အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်နေရာ၌ပင်ရှိနေပါစေ YouTube channel အမျိုးအစားတိုင်းအတွက်ဂရပ်ဖစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ သင်ဘာကိုပြောင်းလဲချင်သည်ကိုရှင်းပြပါ။ ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပါမည်။ နောက်ဆုံးမှာ၊ မင်းရဲ့ YouTube channel မှာသင်ရရှိတဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေကိုနှစ်သက်ချင်တယ်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်ဖစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်ပထမလတွင်တိုးတက်မှုနှေးကွေးသည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ YouTube သည်ရလဒ်များကိုချက်ချင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလများအတွက်အရှိန်အဟုန်သည်တက်လာပြီးတစ်လပြီးတစ်လ ဆက်၍ ဆက်လက်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားတစ်စီးကဲ့သို့…ရလဒ်များနှေးလာလိမ့်မည်၊ သို့သော်အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်အပြည့်အဝမြန်ဆန်စွာမောင်းနှင်နိုင်လိမ့်မည်! ဤရလဒ်သည်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်ဖစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး၊ သင်သည်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုလည်းတင်နေသည်ဟုယူဆနေသည်။ အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကကူညီပေးသည်၊ သို့သော်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပါဝင်မှု၊ ဂရပ်ဖစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်သင်တွေ့ရမည့်ရလဒ်များလေလေဖြစ်သည်။